चक्र बम भन्छन्- 'ओए काजल ! लकडाउनले कमाल गर्‍यो'- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — रिया जाने निहुँमा २०६९ मा कर्णालीबाट काठमाडौं आए चक्र बम । मनमा गायन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हुटहुटी थियो । तर परिवार उनलाई व्यवसाय गर्न हौस्याउँथे । दुईजना दाइ व्यवसाय र अर्का सेनाका जागिरे । उनलाई आफ्नो करियर संगीतमै बनाउनु थियो ।
काठमाडौंमा आएर सुरुमै सेनामा भर्ती हुनका लागि दरखास्त दिएका थिए तर सफल भएनन् । त्यसपछि परिवारको करले उनले कोरियन भाषा पढे । उनको ध्यान पढाइतिर कम संगीततिर बढी जान थाल्यो । सुदूरपश्चिमका कलाकारसँग नजिक हुने, स्टुडियो जाने माहोल बन्न थाल्यो । ५० हजार बढी खर्चेर पहिलो गीत निकाले । गीत खासै चलेन । परिवारलेसमेत गीत सार्वजनिक भएको ४ महिनापछि मात्रै थाहा पाए ।
गीत रेकर्ड गर्न काठमाडौं गएको कि विदेश जान ? पहिलो गीतबारे सुनेपछि परिवारले उनलाई सोधेका थिए । उनी अनुत्तरित भए । त्यसबीच कोरियन भाषा परीक्षा ईपीएसमा उनको नाम निस्केन । परिवारलाई अन्य देश जाने प्रकिया चालेको बहाना गर्दै दोस्रो देउडा गीत रेकर्ड गराए । त्यो पनि दर्शकको नजरमा परेन । दुईवटा गीत निकालिसकेपछि कुन क्षेत्रमा करिअर बनाउने ? चक्र अलमलमा परे । गाउँ फर्कने मन भएन । काठमाडौंमै बस्ने निधो गरे । एकजना दाइको सहयोगमा दोहोरी साँझतिर काम थाले । 'कोठा भाडा तिर्नकै लागि दोहोरी साँझमा काम गरेँ । परिवारसँग खर्च माग्‍न पनि भएन । मलाई संगीतमै केही गरेर देखाउनुथियो,' उनले पुराना दिन सम्झिए ।
प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ १७:३६
स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन कार्यालय र कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लकडाउन सकिए पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम यथावत् रहेको भन्दै हरेक कार्यालय र कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयको मंगलबारको कोभिड १९ प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले कार्यालय छिर्नुअघि कर्मचारीहरुको अनिवार्य तापक्रम जाँच, मास्क लगाउन, स्यानीटाइजर प्रयोग, रुघाखोकी लागेको र ज्वरो आएका कर्मचारीलाई घरमै आराम गर्न लगाउने जस्ता सुरक्षाका उपाय अपनाउन अनुरोध गरेका हुन् ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बचाउन भन्दै चैत ११ देखि जारी गरेको लकडाउन यही ६ गते मंगलबार मध्यराति अन्त्य गरिएको थियो । नेपालमा मंगलबारसम्म संक्रमितको संख्या १९ हजार ६३ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा मात्रै उपत्यकामा ५३ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ १७:२८
'नेपाल र भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध ‘ब्लेम–गेम’ मा अड्कियो'
संक्रमण रोक्ने हो भने काठमाडौंलाई तत्काल सिल गर्नुपर्छ : मेयर शाक्य
नेकपामा अध्यक्ष स्वयंबाट अराजकता सिर्जना भएको छ : श्याम श्रेष्ठ